Entsha Martech Zone Ilogo ye2019 | Martech Zone
Indawo enye endingakhange ndibeke mali kuyo ekutshisweni yile ndawo. Ngelixa lam Nkonzo ndinelogo entle endiyithandayo, kwaye sisebenza nabo bonke abathengi bethu kuphawu lwabo, bendingenalo nje ibhendi yokusebenzela kwi Martech Zone uphawu… kude kube namhlanje.
Isimboli endala "M" yayisisiseko esenziwe kancinci endisithengileyo ngokungxama emva kokutshintsha idomain. Kwakucacile, kwakungekho nto, kwaye kwakundikhathaza ngalo lonke ixesha ndiyibona.
Umyili obesebenza kwi Highbridge I-logo ibone ukuba iarhente yethu isebenze ngeendlela ezizodwa kunye nezinobuchule bokunyusa iziphumo kubaxumi bethu. Isimboli iyintengiso ngasekhohlo kwaye k ngasekunene, kodwa ngeendlela ezizodwa ezixhasa utolo oluphezulu.
Ndisoloko ndingumntu othanda ukuba luhlaza okwesibhakabhaka kwilogo yam ngokunjalo, ipholile, iyazolisa kwaye iyaqinisekisa. Ke, kunokuba uqale ekuqaleni kunye nelogo entsha ye Martech Zone, Ndidibanise ndaza ndadibanisa i Highbridge logo. Ukufana kubalulekile njengoko ndifuna ukwenza uphawu lwearhente kunye nebhlog ngokufanayo.
Isenokungabonakali, kodwa ilogo idibanisa i m, t, kunye no z… ukubonisa marteh zNye. Ndonwabile ukuyila uninzi lwemizekelo ngaphambi kokutsiba kumzobi kunye nokwakha. Isengahambelani, ke ndiyakholelwa ukuba imele le bhlog.
Kunye nelogo, ndikukhanyisile kwaye ndaguqula umxholo kwi imakro.zone njengokuba. Ukuba ufunda ngale nto kwincwadana yethu, qiniseka ukucofa kuyo kwaye ujonge. Ndilinciphisile inani lokubhaliweyo, uhlengahlengiso lwesihloko kunye neefonti zomzimba zokufundeka okuphuculweyo, ndaze ndadibanisa umbala kwiindidi (kusenokufuneka ndizenze).
Enye yeenjongo zam kulo nyaka kukumamela ngakumbi kuwe kwaye ndiqale incoko nawe… ukuhambisa abaphulaphuli bam babe ngabantu. Ke, ingxelo yamkelwe kwaye iyakhuthazwa! Ndazise into ongathanda ukuyifunda ngakumbi malunga nendlela endinokuyiphucula ngayo indawo kunye neepodcast.
I-WordPress: Uyifaka njani kwaye uyifaka njani iPDF